Abiy Axmed oo lagu eedeeyay hurinta xasarado ka aloosan dalal ay ku jirto Soomaaliya – Hornafrik Media Network
Abiy Axmed oo lagu eedeeyay hurinta xasarado ka aloosan dalal ay ku jirto Soomaaliya
Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed, ayaa wajahaya eedeemo culus oo ku aadan in xasilooni daro uu ka abuurayo gudaha dalalka dariska la’ah Itoobiya sida Soomaaliya, iyo Suudaanta Koonfureed.
Warbixin uu daabacay wargayska Daily Nation ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in Labo warbixin oo bishii November kasoo baxday QM lagu qeexay in Abiy Ahmed uu ku fashilmay inta uu ahaa gudoomiyaha urur goboleedka IGAD, in uu horumar ka gaaro geedi socodka nabadeed ee Suudaanta Koonfureed.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya uu sii huriyay xasilooni darada Soomaaliya.
Safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya dalka Kenya Meles Alem, ayaa Jimcihii Daily Nation u sheegay in eedeemaha loosoo jeedinayo dowladiisa ay yihiin kuwo aanan waxba ka jirin.
“Mid kamid ah tiirarka siyaasadda arimaha dibadda ee dowladda ku taagan tahay ayaa ah in aanan lafara galinin arimaha gudaha ee wadamada kale” ayuu hadalkiisa sii raaciyay safiirka Itoobiya.
Madashada Xisbiyada Qaran ee dalka ayaa warqad ay u qoreen Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxa ay ku waydiisteen in dowladiisu ay joojiso faragalinta siyaasadeed oo ay ku heeso Soomaaliya.
Qaar kamid axsaabta mucaaradka iyo siyaasiyiin ku eedeeyay dowladda Itoobiya in ciidamo aanan ka tirsaneen Amisom ay geeyeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaas oo lagu wado in dhawaantan ay kadhacdo doorashada maamulka.
Horay gudiga QM u qaabilsan cunaqabateenta hubka ee saran Soomaaliya, ayaa Golaha Amaanka ee QM u sheegay in dowladda Itoobiya ay ku xad gudubtay cunaqabateentaasi kadib markii lagu eedeeyay in ay hub geesay gudaha Soomaaliya.
Eedeemahan cusub ee uu wajahayo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ee Abiy Ahmed, ayaana kusoo aadayo xilli dhawaantan uu ku guulaystay bilada nabadda dunida ee “Nopel Peace Price”
Maxuu yahay Ajendaha kulanka maanta ee golaha Aqalka Sare?
Doorasho ka dhacday dalka Namibia oo mar kale uu ku guulaystay Madaxwaynihii….